Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Dwumadzi Nwoma—No Ho Nhwehwɛmu — Ɔweɔn-Aban INTANƐT DO NWOMAKORABEA
mwbr19 September nkr. 1-8
Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Dwumadzi Nwoma—No Ho Nhwehwɛmu
Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Dwumadzi Nwoma—No Ho Nhwehwɛmu—2019
AKORADZE A OFI NYANKOPƆN N’ASƐM MU | HEBREWFO 7-8
“Ɔsɔfo A Ɔwɔ Hɔ Daa Tse Dɛ Melchizedek”
Nna ɔyɛ tsetse Salemhen nye Jehovah a ɔyɛ ‘sorsor Nyankopɔn no sɔfoe.’ (Ge 14:18, 22) Ɔno nye ɔsɔfo a wodzii kan kãa noho asɛm wɔ Kyerɛwnsɛm no mu; ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛyɛɛ ɔsɔfo ansaana 1933 A.H.B. no mu. Salem kyerɛ “Asomdwee,” na osiandɛ nna Melchizedek yɛ ɔhen wɔ dɛm kurow no do ntsi, ɔsomafo Paul frɛɛ no “asomdwee Hen.” Afei so, osian mbrɛ ne dzin Melchizedek kyerɛ no ntsi, ɔsanee so frɛɛ no “tsenenee Hen.” (Heb 7:1, 2) Dzin Jerusalem no fi tsetse kurow Salem mu, ntsi ɔtɔfabi a, wotum frɛ Jerusalem dɛ “Salem.”​—Nd 76:2.
Ber a Abram (Abraham) dzii Chedorlaomer nye ahemfo a nna wɔka noho no do konyim no, ɔbaa Shaveh Bɔnsa anaa “Ɔhen no Bɔnsa” mu. Melchizedek “dze paanoo nye wenyin bae” behyiaa no wɔ hɔ, na ohyiraa Abraham kãa dɛ: “Nhyira mfi Abɔso [anaa Sorsor] Nyankopɔn a ɔsor nye asaase yɛ nedze no hɔ nkã Abram; na nhyira nkã [Sorsor] Nyankopɔn a ɔdze w’atamfo ahyɛ wo nsa.” Ɔkãa nsɛm yi wiei no, Abraham maa ɔhen a ɔsan so yɛ ɔsɔfo no “ndzɛmba no nyinara mu ebupɛn dudu,” a ɔyɛ “asadze a ɔsom bo” a onyae fii konyim a odzii no mu wɔ ahemfo no do no.​—Ge 14:17-20; Heb 7:4.
Ebɛnadze ntsi na yebotum akã dɛ nna Melchizedek ‘nnyi nda ahyɛse, anaa nkwa ewiei’?
Paul kã nokwasɛm bi a ɔda nsew fa Melchizedek ho dɛ: “Onnyi egya, onnyi nã, onnyi nanakan, onnyi nda ahyɛse, anaa nkwa ewiei, na wɔdze no to Nyankopɔn Ba no ho, ɔsɔfo a ɔwɔ hɔ daa.” (Heb 7:3) Nna Melchizedek yɛ nyimpa, ntsi ɔno so wɔwoo no, na ekyir yi owui. Naaso, Bible no mmbɔ n’egya na ne nã hɔn edzin, na ɔnnkã ebusuasantsen a ofi mu anaa ne mba so ho asɛm. Dɛmara so na Kyerɛwnsɛm no nnkã n’awoo anaa no wu so ho asɛm biara. Ntsi, sɛ wɔkã dɛ Melchizedek yɛ Jesus Christ ne daa asɔfodzi no no sunsuma a, nna ɔfata papaapa. Kyerɛwnsɛm no nnkã dɛ Melchizedek dzii obi n’adze anaadɛ obi so bedzii n’adze dɛ ɔsɔfo. Dɛmara na Christ so tse; sɔfopanyin biara nnyi hɔ a ɔtse dɛ Jesus a odzii sɔfo ana Jesus reba, na Bible no ma yehu so dɛ obiara rinndzi n’adze da. Bio so, ɔwɔ mu dɛ wɔwoo Jesus wɔ Judah ebusua mu na n’ahendzi so fi David ebusua mu dze, naaso ebusua a wɔwoo no too mu dɛ nyimpa no nye n’asɔfodzi no nnyi hwee yɛ. Dɛmara so na ɔnnyɛ ebusua a wɔwoo no too mu wɔ asaase do no na ɔma ɔfata dɛ ɔsɔfo nye ɔhen. Jehovah nankasa na ɔkãa ntam dɛ ɔbɛyɛ no ɔhen nye ɔsɔfo.
Christ N’asɔfodzi No Ntotoho. Nkɔnhyɛ a ɔfa Messiah no ho no mu tsitsir kor nye ntam a Jehovah kãa kyerɛɛ David no “wura” dɛ: “Ɔwo eyɛ ɔsɔfo daa wɔ Melchizedek mbron do.” (Nd 110:1, 4) Dɛm ndwom a sunsum krɔnkrɔn kaa David ma ɔkyerɛwee no maa Hebrewfo no nyaa biribi a wobotum egyina do akã dɛ nna Messiah a wɔahyɛ noho bɔ no bedzi adze dɛ ɔhen nye ɔsɔfo. Wɔ krataa a ɔsomafo Paul kyerɛwee kɛmaa Hebrewfo no mu no, ɔmaa no mu daa hɔ kofee dɛ ɔyɛ Jesus na wɔhyɛɛ noho nkɔm no, na wɔayɛ no sɔfopanyin daa tse dɛ Melchizedek.​—Heb 6:20; 5:10.
Pɛnsapɛnsa Bible Mu
w00-E 8/15 14 ¶11
Afɔrbɔ Ahorow A Nna Ɔsɔ Nyankopɔn Enyi
Ɔsomafo Paul kãa dɛ: “Sɔfopanyin biara wɔhyɛ no ma ɔdze ayɛyɛdze nye afɔrbɔdze aama.” (Hebrewfo 8:3) Hyɛ no nsew dɛ Paul kyɛɛ afɔr a nna sɔfopanyin a nna ɔwɔ tsetse Israel no bɔ no mu ebien; kor yɛ “ayɛyɛdze” anaa akyɛdze, na kor so yɛ “afɔrbɔdze” anaa bɔn ho afɔrbɔdze. Mpɛn pii no, nkorɔfo dze akyɛdze ma dze da ɔdɔ nye enyisɔ a wɔwɔ no edzi. Ber kor no ara, akyɛdze ma anyɛnkoyɛ kɔ do, ɔma obi nya enyimpa anaa ɔma wɔgye obi to mu. (Genesis 32:20; Mbɛbusɛm 18:16) Dɛmara so na ndzɛmba a Nyankopɔn kãa dɛ wɔmfa mbɔ afɔr wɔ Moses Mbra no mu no tse; nna no mu pii yɛ akyɛdze a wɔdze ma Nyankopɔn na aama ɔagye hɔn ato mu anaa wɔdze apɛ n’enyimpa. Sɛ nna obi tõ Mbra no so a, nna ɔsɛ dɛ ɔdze bɔn ho afɔrbɔdze ma Nyankopɔn na aama ɔasɔ Nyankopɔn enyi.
Ɔyɛɛ dɛn na Mbra apam no bɛyɛɛ “dadaw”?
Wɔ kwan bi do no, Mbra apam no bɛyɛɛ “dadaw” ber a Nyankopɔn nam nkɔnhyɛnyi Jeremiah do kãa dɛ apam anaa ahyɛmu fofor bi bɛba no. (Jer 31:31-34; Heb 8:13) Wɔ 33 H.B. no, wogyinaa wu a Christ wui wɔ asɛndua do no do twaa Mbra apam no mu (Col 2:14), na wɔdze apam fofor no hyɛɛ ananmu.​—Heb 7:12; 9:15; Adw 2:1-4.
AKORADZE A OFI NYANKOPƆN N’ASƐM MU | HEBREWFO 9–10
“Ndzepa A Ɔbɛba No No Sunsuma”
Wɔ mbra a Nyankopɔn dze maa Israelman no mu no, sɛ nna obi a ɔayɛ Nyankopɔn anaa ne nyɛnko bɔn no botum enya bɔnfakyɛ a, odzi kan no nna ɔsɛ dɛ nyimpa no yɛ bɔn a ɔayɛ no ho biribi dɛ mbrɛ nna wɔakyerɛ wɔ Mbra no mu no, na mpɛn pii no, nna ɔsɛ dɛ oku abowa bi na ɔdze bɔ ɔhyewafɔr ma Jehovah. (Le 5:5–6:7) Iyi ntsi na Paul kãa dɛ: “Aka kakra na maakã dɛ adze nyina, dɛ mbrɛ mbra no tse, wɔdze bɔgya tsew ho, na bɔgya enngu a, fakyɛ bi nnyi hɔ.” (Heb 9:22) Nokwasɛm nye dɛ, mbowa a nna wɔdze bɔ afɔr no bɔgyaa enntum ennyi obi no bɔn emmfi hɔ na aama oenya tsibowa a odzi mu kora kora. (Heb 10:1-4; 9:9, 13, 14) Naaso, apam fofor a wɔhyɛɛ ho nkɔm no dze, nna wobotum egyina Jesus Christ no werdam afɔrbɔ no do ama obi eenya bɔnfakyɛ a odzi mu. (Jer 31:33, 34; Mt 26:28; 1Co 11:25; Eph 1:7) Aber a nna Jesus wɔ asaase do no mpo no, ɔsaa mbubuinyi bi a nna ɔda mpa do yarba dze kyerɛɛ dɛ ɔwɔ tum dɛ ɔdze bɔn bɛkyɛ.​—Mt 9:2-7.
cf-E 183 ¶4
“Ka Mo Do”
Jesus kodur sor no, Kyerɛwnsɛm no annkã akɔaba a wɔdze maa no nye enyigye a ɔkɔr do wɔ hɔ aber a ɔnye n’Egya kehyiaa mu bio no ho asɛm. Naaso, nna Bible no edzi kan ama yehu dza ɔbɔkɔ do wɔ sor, ber a Jesus afow akɔ hɔ wɔ mber kakra bi ekyir no. Ɔwo dze susu ho hwɛ o, mfe bɔbɔr 1,500 na nna Jewfo no dze ehu dwumadzi krɔnkrɔn bi a nna ɔkɔ do wɔ hɔn man no mu. Afe biara mu no, nna ɔsɔfopanyin no dze da kor kɛhɛn Krɔnkrɔn Mu Krɔnkrɔn bea hɔ wɔ asɔrfi hɔ, na ɔdze mbowa a wɔdze bɔɔ afɔr wɔ Mpata Da mu no bɔgyaa kɛpetsepetse ahyɛmu adaka no enyim. Dza nna ɔsɔfopanyin no yɛ no wɔ dɛm da no twa dza nna Messiah no rebɛyɛ no ho mfonyin. Aber a Jesus sanee kɔr sor no, ɔmaa dɛm nkɔnhyɛ kwan do dwumadzi yi nyaa ne mbamu kora kora. Ɔkɔr Jehovah a ɔyɛ otumfo ankasa no enyim wɔ sor​—hɔ nye bea a ɔyɛ krɔnkrɔn kyɛn bea biara wɔ amansan yi mu​—na ɔdze bo a werdam afɔr a ɔbɔe no som no kɛkyerɛɛ n’Egya.​—Hebrewfo 9:11, 12, 24.
Dza Ɔma Moses Mbra No Dzi Mu. Wɔ Mbra a Nyankopɔn dze maa Moses no mu no, nna asɔfodzi ho nhyehyɛɛ na mbowa a wɔdze bɔbɔ afɔr ahorow ho nhyehyɛɛ ka ho. Nyankopɔn na ɔdze Mbra no mae, ntsi nna Mbra no dzi mu; naaso, dɛ mbrɛ ɔsomafo Paul kyerɛe no, Mbra no o, n’asɔfodzi ho nhyehyɛɛ no o, anaa afɔrbɔ ahorow no o, no mu biara amma hɔn a nna wɔhyɛ Mbra no ase no enndzi mu. (Heb 7:11, 19; 10:1) Mbra no amma wɔanndze hɔnho emmfi bɔn anaa owu ho, mbom no, ɔmaa ɔbɛdaa edzi kofee dɛ wɔyɛ ndzebɔnyɛfo. (Ro 3:20; 7:7-13) Naaso, nokwasɛm nye dɛ, dɛm nhyehyɛɛ ahorow a Nyankopɔn dze too akwan mu no dzii dwuma a nna Nyankopɔn pɛ dɛ odzi no; Mbra no dzii dwuma dɛ “kyerɛfo” a ɔkyerɛɛ nyimpa kwan kɔr Christ nkyɛn, na ɔyɛɛ “ndzepa a ɔbɛba no no sunsuma” a odzi mu. (Ga 3:19-25; Heb 10:1) Ntsi, aber a Paul kãa ‘dza mbra no enntum annyɛ, osiandɛ ɔnam honam no do yɛ mberɛw ntsi no’ ho asɛm no (Ro 8:3), dza nna ɔrepɛ akyerɛ ankasa nye dɛ, honam afamu Jewfo sɔfopanyin no (a nna Mbra no apaw no dɛ ɔno na ɔmbɔ afɔr mma ne mamfo, na afei so ɔmfa bɔgya a wɔdze bɔɔ afɔr no nkɔ Krɔnkrɔn Mu Krɔnkrɔn bea hɔ wɔ Mpata Da no) enntum ‘anngye’ hɔn a nna ɔsom hɔn no “koraa,” dɛ mbrɛ wɔakyerɛkyerɛ mu wɔ Hebrewfo 7:11, 18-28 no. Ɔwɔ mu dɛ afɔr a wɔnam Aaron asɔfodzi nhyehyɛɛ no do bɔe maa Israelmba no maa wonyaa gyinabew pa wɔ Nyankopɔn n’enyim dze, naaso, wɔanngye hɔn emmfi bɔn afɔbu ho kora kora. Ntsi ɔsomafo no kãa afɔr yi a nna wɔbɔ dze pata bɔn no ho asɛm dɛ wɔamma “hɔn a wɔba no” hɔn tsibowa ‘enndzi mu wɔ bɔn ho da.’ (Heb 10:1-4; fa toto Heb 9:9 ho.) Ɔsɔfopanyin no enntum ammfa werdam ankasa a obotum apata bɔn no amma. Christ n’asɔfodzi edwuma a odzi mu daa no nye n’afɔrbɔ no nkotsee na otum pata bɔn kora kora.​—Heb 9:14; 10:12-22.
w92-E 3/1 31 ¶4-6
Nsɛmbisa A Ofi Akenkamfo Hɔ
Ber a ɔsomafo Paul kãa Moses na Jesus ho asɛm dɛ wɔyɛ nyimpa a wɔnye hɔn yɛɛ samansew anaa apam no, nna nnyɛ dza ɔrepɛ akyerɛ nye dɛ Moses anaa Jesus na wɔhyehyɛɛ apam ahorow no. Nyankopɔn na ɔhyehyɛɛ dɛm apam ahorow no nyina. Dza nna Paul rekã ara nye dɛ dɛm nyimpa beenu yi dzii dwuma tsitsir bi dɛ ntamugyinafo maa dɛm apam ahorow no yɛɛ edwuma. Nna ɔsɛ dɛ obi wu ana apam no mu biara etum ayɛ edwuma. Wɔ Moses n’afamu no, nnyɛ ɔno na wokum no, na mbom wokum mbowa dze hyɛɛ n’ananmu; wɔ hɔn a wɔwɔ apam fofor mu no afamu no so, Jesus nankasa no bɔgyaa na ɔdze bɔɔ afɔr no.
Luke asɛmpa no kã dɛ, ber a nna worunuma Jesus anaa wɔrobɔ no esu no, nna ɔrobɔ mpaa. (Lu 3:21) Ɔsomafo Paul kyerɛkyerɛɛ asɛm yi mu kɔr ekyir wɔ krataa a ɔkyerɛwee kɛmaa Hebrewfo no mu. Ɔkãa dɛ aber a Jesus ‘baa wiadze’ no (iyi nnyɛ aber a wɔwoo no dɛ abofra kakraba a nna onnyim kasa mpo na akantam ɔakenkan dɛm asɛm yi no, mbom, ɔyɛ ber a ɔdze noho kɔree dɛ wonnuma no na ɔhyɛɛ no som edwuma ase no) na nna ɔrekã asɛm a ɔwɔ Ndwom 40:6-8 no dɛ: “Afɔr nye ayɛyɛdze ammpɛ, na honam na esiesie ama me; . . . Hwɛ, maba (Wɔakyerɛw no mo ho wɔ nwoma mbobɔwee no mu) dɛ merebɛyɛ ɔwo Nyankopɔn wo pɛ.” (Heb 10:5-9) Nna Jewfo no nye Nyankopɔn ayɛ apam, ntsi dɛ ɔman no, nna no mufo nyina hyɛ dɛm apam a wɔfrɛ no Mbra apam no ase. (Ex 19:5-8; Ga 4:4) Osiandɛ wɔwoo Jesus wɔ Jewfo ebusua mu ntsi, nna ɔno so yɛ Jewnyi. Ntsi, yebotum egyina iyi do akã dɛ, nna Jesus edzi kan nye Jehovah Nyankopɔn ayɛ apam bi dada ber a ɔkɔr John hɔ dɛ ɔmbɔ no esu no. Jesus noho a ɔdze kɔr dɛ wɔmbɔ no esu no bor dza nna Mbra no hwehwɛ dɛ ɔyɛ no do koraa. Nna ɔdze noho rema n’Egya Jehovah dɛ ɔbɛyɛ n’Egya ne “pɛ,” dze nam no honam nyimpadua a nna ‘woesiesie’ a ɔdze rebɛma no do, na ɔdze eetwa mbowa a nna Mbra no hwehwɛ dɛ wɔdze bɔ afɔr no mu. Ɔsomafo Paul kãa dɛ: “Dɛm pɛ no do na wɔnam Jesus Christ honam a ɔdze bɔɔ afɔr prɛko maa hɛn no do atsew hɛn ho.” (Heb 10:10) Nna ndwuma a ɔfa Ahendzi no ho no ka Jehovah ne pɛ ma Jesus no ho, ntsi Jesus dze noho maa dɛm ɔsom no so. (Lu 4:43; 17:20, 21) Jehovah dze sunsum krɔnkrɔn seraa ne Ba no dze kyerɛɛ dɛ ɔagye Jesus noho a ɔdze ama no ato mu na ɔpen do. Ntsi Jehovah kãa kyerɛɛ Jesus dɛ: “Ɔwo nye mo Dɔba a m’enyi sɔ wo.”​—Mr 1:9-11; Lu 3:21-23; Mt 3:13-17.
AKORADZE A OFI NYANKOPƆN N’ASƐM MU | HEBREWFO 11
“Gyedzi Ho Hia”
w16.10-E 27 ¶6
Nya Jehovah No Bɔhyɛ Ahorow Mu Gyedzi
Bible no kyerɛkyerɛ gyedzi mu wɔ Hebrewfo 11:1. (Kenkan.) Gyedzi gyina ndzɛmba ahorow ebien a yemmfa hɛn enyi nnhu no do; ɔno nye: (1) “Adze a hɛn enyi da do”​—iyi mu bi botum ayɛ nsɛm a obesisi daakye a wɔahyɛ ho bɔ naaso onyae mbaa mu tse dɛ emumuyɛ nyina a ɔbɛba ewiei nye wiadze fofor a ɔreba no. (2) “Adze a enyi nntua.” Dza Greek kasafua a wɔkyerɛ ase “nokwar ho ngyetomu” a wɔdze edzi dwuma wɔ nkyekyɛmu yi mu kyerɛ nye biribi a enyi nntua naaso no ho adanse a ɔyɛ nokwar kyerɛ kofee dɛ ɔwɔ hɔ; iyi ho nhwɛdo bi nye Jehovah Nyankopɔn, Jesus Christ, abɔfo no, nye ndwuma ahorow a ɔkɔ do wɔ sor Ahendzi no mu. Yɛmmfa hɛn enyi nnhu iyinom mu biara dze, naaso ɔyɛ paara. (Heb. 11:3) Yɛbɛyɛ dɛn akyerɛ dɛ yɛwɔ gyedzi mapa na yɛgye ndzɛmba a yennhu a wɔakã ho asɛm wɔ Bible mu no dzi? Yɛdze hɛn kasaa nye hɛn ndzeyɛɛ na yɛdze bɛkyerɛ, osiandɛ, dɛm a yɛbɛyɛ no na ɔbɛma hɛn gyedzi edzi mu.
w13-E 11/1 11 ¶2-5
“Hɔn A Wɔhwehwɛ N’ekyir Kwan No Katuafo”
Ebɛnadze na ohia na aama yetum asɔ Jehovah n’enyi? Paul kyerɛɛw dɛ, “Sɛ gyedzi nnyi mu a, obi nntum nnsɔ [Nyankopɔn] n’enyi.” Hyɛ no nsew dɛ Paul annkã dɛ sɛ obi nnyi gyedzi a ɔbɛyɛ dzen dɛ ɔbɔsɔ Nyankopɔn enyi. Mbom dza ɔkãe nye dɛ, obi nntum nnsɔ n’enyi. Sɛ yɛbɛkã no wɔ kwan fofor do a, gyedzi ho hia papaapa ana obi no som aasɔ Nyankopɔn enyi.
Ebɛn gyedzi na ɔsɔ Jehovah n’enyi? Ɔsɛ dɛ gyedzi a yɛwɔ no wɔ Nyankopɔn mu no gyina ndzɛmba ebien do. Odzi kan, ɔsɛ dɛ ‘yɛgye dzi dɛ ɔwɔ hɔ.’ Sɛ yɛnngye nndzi dɛ Nyankopɔn wɔ hɔ a, nna ɔno yɛbɛyɛ dɛn asɔ n’enyi? Naaso, Nyankopɔn a yɛbɛgye edzi dɛ ɔwɔ hɔ kɛkɛ no nkotsee nnkyerɛ dɛ yɛwɔ gyedzi mapa, siantsir a ɔtse dɛm nye dɛ, esunsum fĩ mpo nyim dɛ Jehovah wɔ hɔ. (James 2:19) Ɔsɛ dɛ gyedzi a yɛwɔ dɛ Nyankopɔn wɔ hɔ ampaara no ka hɛn ma yɛyɛ biribi. Ɔno nye dɛ, yɛbɔbɔ bra a ɔsɔ n’enyi dze akyerɛ dɛ yɛwɔ gyedzi.​—James 2:20, 26.
Otsĩa ebien, ɔsɛ dɛ ‘yɛgye dzi’ dɛ Nyankopɔn yɛ “katuafo.” Obi a ɔwɔ gyedzi mapa no gye to mu ampaara dɛ, mbɔdzen biara a ɔbɔbɔ dze abɔ bra a ɔsɔ Nyankopɔn n’enyi no rennyɛ gyan. (1 Corinthfo 15:58) Sɛ yɛnngye nndzi dɛ Jehovah botum etua hɛn kaw anaa ɔwɔ ɔpɛ dɛ obotua hɛn kaw a, yɛbɛyɛ dɛn asɔ n’enyi? (James 1:17; 1 Peter 5:7) Sɛ obi kã dɛ Nyankopɔn nndwen hɛnho, dza yɛyɛ biara nnyi hɔ a ɔyɛ no fɛw, na ne yamu so yɛ wen a, nna ɔno bi a nnyɛ Nyankopɔn a ɔwɔ Bible mu no ho asɛm na ɔrekã.
Woananom na Jehovah tua hɔn kaw? Ɔsomafo Paul kãa dɛ ɔyɛ “hɔn a wɔhwehwɛ n’ekyir kwan” no. Nwoma bi a hɔn a wɔkyerɛ Bible ase no dze yɛ nhwehwɛmu kyerɛkyerɛ mu dɛ, Greek kasafua a wɔkyerɛ ase “wɔhwehwɛ” no nnkyerɛ dɛ “ibopue akɔhwehwɛ” Nyankopɔn wɔ beebi, na mbom dza ɔkyerɛ nye dɛ obi bɛba Nyankopɔn nkyɛn “wɔ ɔsom mu.” Nhwehwɛmu nwoma fofor bi so kyerɛ dɛm Greek kasafua no mu dɛ obi bɔbɔ noho mbɔdzen dzendzenndzen ahwehwɛ biribi. Ampa, Jehovah tua hɔn a gyedzi ka hɔn ma wɔdze mbɔdzembɔ fi hɔn akoma nyina mu som no no kaw.​—Matthew 22:37.
w16.10-E 23 ¶10-11
Hyɛ Gyedzi A Ewɔ Wɔ Dza W’enyi Da Do No Mu No Dzen
Wɔ Hebrewfo tsir 11 mu no, ɔsomafo Paul kãa nsɔhwɛ pii a Nyankopɔn n’asomfo bi a wɔammbobɔ hɔn edzin no gyinaa ano. Dɛ mfatoho no, ɔsomafo no kãa dɛ mbaa bi hweer hɔn mbabanyin wɔ owu mu, naaso owusoɛr ntsi, hɔn nsa kaa hɔn bio. Afei ɔkãa afofor so a “wɔammpɛ ɔgye, ma woeenya owusoɛr a oye kyɛn” no so ho asɛm. (Heb. 11:35) Yerunntum nnkyerɛ nyimpa pɔtsee a nna Paul rekã hɔnho asɛm no dze, naaso yenyim dɛ, osiandɛ nyimpa bi tse dɛ Naboth na Zechariah tsiee Nyankopɔn asɛm ntsi, wosiiw hɔn abo. (1 Ahe. 21:3, 15; 2 Mber. 24:20, 21) Sɛ Daniel na n’anyɛnkofo no gyaa hɔn emudzi mu a, nkyɛ wonyaa ho kwan koraa dɛ wobenya “ɔgye.” Naaso, osian gyedzi a nna wɔwɔ wɔ Nyankopɔn no tum mu ntsi, wɔ kwan bi do no, ‘wosiiw ngyata ano’ na ‘woduum gya n’ahoɔdzen.’​—Heb. 11:33, 34; Dan. 3:16-18, 20, 28; 6:13, 16, 21-23.
Osian gyedzi a nna nkɔnhyɛfo bi tse dɛ Micaiah na Jeremiah wɔ ntsi, nsɔhwɛ a wohyiae nye “atwetwesi . . . nye efiadzenda.” Afofor, tse dɛ Elijah so, hɔndze nye dɛ, “wokyinkyiin sar nye mbepɔw do, abodan nye asaase etu mu.” Dɛm nkorɔfo yi nyina gyinaa mu osiandɛ nna wɔwɔ ‘adze a hɔn enyi da do ho awerɛhyɛmu a osi pi.’​—Heb. 11:1, 36-38; 1 Ahe. 18:13; 22:24-27; Jer. 20:1, 2; 28:10, 11; 32:2.
Hɔn A Wɔdaa Gyedzi Edzi Wɔ Tsetseberdo. Nna “adasefo mununkum” (Heb 12:1) a Paul bobɔɔ hɔn edzin no nyinara gyedzi gyina biribi a osi pi do. Dɛ mfatoho no, nna Abel nyim Nyankopɔn no bɔhyɛ a ɔfa ‘asenyi’ a ɔbɔbɔ “abowatsena no” ne tsir no ho. Afei so dza Jehovah kãe wɔ Eden dɛ ɔbɔto n’awofo nyina, ohun adanse a odzi mu pii a ɔkyerɛ dɛ ne nyinara aba mu. Adam fii Eden no, nna nhwirom nye nsoɛ na ofifir wɔ asaase no do osiandɛ nna wɔadom asaase no; ntsi, nna ɔnye n’ebusua nyina tsew hɔn enyim mfifir ana woenya biribi edzi. Ɔbɛyɛ dɛ nna Abel hu dɛ Eve hia no kun papaapa ana oetum ayɛ biribi, na nna Adam so dzi ne yer no do tum. Yebotum akã so dɛ, nna ne maame Eve taa kã yaw a ɔfa mu aber a awoo aka no ho asɛm. Bio so, nna nkrantsee a onyinanyinam na cherubim weɔn Eden ture no enyim. (Ge 3:14-19, 24) Nna iyinom nyina yɛ dase paara a nna ɔma Abel nya awerɛhyɛmu dɛ, ‘asenyi a wɔahyɛ noho bɔ’ no na obotum dze ɔgye bi aba. Iyi ntsi, gyedzi kaa no ma ‘ɔbɔɔ afɔr maa Nyankopɔn,’ na ɔno maa n’afɔrbɔ no yɛɛ dza nna oye kyɛn Cain nedze no.​—Heb 11:1, 4.
“Ɔasɔ Nyankopɔn Enyi”
Ebɛnadze ntsi na yebotum akã dɛ “wɔfaa Enoch kɔree” na “oennhu owu”? Ɔbɛyɛ dɛ Jehovah faa Enoch bɔkɔɔ fii nkwa mu kɔr owu mu, na amma ɔanntse yaw biara ana oewu. Naaso, Enoch dzii kan nyaa “dase dɛ ɔasɔ Nyankopɔn enyi.” Ebɛn kwan do? Ɔbɛyɛ dɛ ansaana Enoch rubowu no, Nyankopɔn maa onyaa enyido-adzehu bi; bi a nna dɛm enyido-adzehu no fa asaase do paradise no ho. Enoch nyaa adanse a osi pi dɛm fii Jehovah hɔ no, Enoch daan n’enyi kyerɛɛ ban. Aber a ɔsomafo Paul rekyerɛw Enoch nye mbarimba na mbaa anokwafo ho asɛm no, ɔkyerɛɛw dɛ: “Gyedzi mu na iyinom nyina wui.” (Hebrewfo 11:13) Ɔno ekyir no, ɔbɛyɛ dɛ n’atamfo no hwehwɛɛ ne nyimpadua no ara yie, naaso “woennhu” wɔ beebiara. Bi a Jehovah dze ne nyimpadua no too beebi amma wɔannyɛ no fun no adze gyangyan anaa wɔammfa annhyɛ ator som ho nkuran.
AKORADZE A OFI NYANKOPƆN N’ASƐM MU | HEBREWFO 12-13
“Jehovah Ne Ntsẽa Kyerɛ Dɛ Ɔdɔ Hɛn”
w12-E 3/15 29 ¶18
Mma Nnhwɛ “Ndzɛmba A Ɔwɔ W’ekyir” No
Afotu a no mu yɛ dzen. Sɛ ɔba no dɛ afotu bi a wɔdze maa hɛn no annyɛ hɛn dɛw ma ntsi yɛdze ebufuw pow ɛ? Adzeyɛ a ɔtse dɛm no remmfa yaw nko mmba, mbom no obotum so ama yaayɛ mberɛw wɔ sunsum afamu na ‘yaapa abaw’ mpo. (Heb. 12:5) Sɛ wɔma hɛn afotu na yɛpow a, ɔkyerɛ dɛ yebu afotu no “adzeba.” Afei so, sɛ yetsie afotu no naaso yɛammfa annyɛ edwuma a, ɔkyerɛ dɛ ‘yɛapa abaw’ wɔ afotu no ho. Ne nyinara mu no, yɛamma kwan ma afotu no annyɛ hɛn mu edwuma, na yennya mfaso biara so wɔ do. Hwɛ mbrɛ nyansa wɔ mu dɛ yɛdze Solomon n’asɛm yi bɛyɛ edwuma: “Suo nkyerɛkyerɛ mu dzendzen; mma nngyaa no: fa no sie; na wo nkwa ara nye no.” (Mbɛ. 4:13) Tse dɛ hɛnkanyi a ɔdze akwankyerɛdze a ɔwɔ kwan do yɛ edwuma no, hom mma yentsie afotu na yɛmfa nyɛ edwuma ama yeetu mpon.​—Mbɛ. 4:26, 27; kenkan Hebrewfo 12:12, 13.
w12-E 7/1 21 ¶3
“Sɛ Hom Rosoɛr A, Hom Nse Dɛ, Egya”
Egya a ɔdɔ ne mba, na ɔdwen nyimpa kor a ne mba no benyin abɛyɛ daakye ho no, na ɔtsẽa hɔn. (Ephesusfo 6:4) Egya a ɔtse dɛm no dze ne nan si famu, naaso sɛ ɔretsen ne mba a, ɔnnyɛ hɔn heihei. Dɛmara na hɛn sor Egya no so tse, ɔtɔfabi a ɔtsẽa hɛn. Naaso aber biara Nyankopɔn fi ɔdɔ mu na ɔdze ntsẽa no ma, ɔnnyɛ hɛn heihei da. Jesus tse dɛ n’Egya, ɔno so nnyɛ heihei. Sɛ nna ɔdze ntsẽa a ɔfata bi ma n’esuafo no, na wɔammfa annyɛ edwuma ntsɛm mpo a, nna ɔnnkeka mu nngu hɔn do.​—Matthew 20:20-28; Luke 22:24-30.
w18.03-E 32 ¶18
“Tsie Afotu Na Eehu Nyansa”
Ɔwɔ mu dɛ ntsẽa yɛ yaw dze, naaso sɛ yɛpow a, dza ofi mu ba no yɛ yaw kyɛn biribiara. (Heb. 12:11) Ma yɛmfa nyimpa beenu yi dɛ nhwɛdo​—Cain na Ɔhen Zedekiah. Aber a Cain taan no nua Abel dzendzenndzen na ɔpɛɛ dɛ oku no no, Nyankopɔn bɔɔ Cain kɔkɔ dɛ: “Ɔyɛ dɛn ntsi na wo bo efuw yi? Na ɔyɛ dɛn ntsi na wo ntɔn ehima yi? Sɛ eyɛ papa a nkyɛ w’enyim nnkɛba nyam? Na sɛ annyɛ papa a, bɔn kotow abowano: na w’ekyir kwan na ɔbɔhwehwɛ, na ɔwodze ahom no do.” (Gen. 4:6, 7) Naaso Cain ammfa ne tsir anngye. Bɔn no nyaa no do nkantando kɛse. Afei, ɔkɛfaa yaw na amandzehu bi a ɔda ne beebi bɔtoo noho do. (Gen. 4:11, 12) Sɛ otsiee Jehovah n’afotu a, nkyɛ orunnhu amandze pii dɛm.
w11-E 9/15 17-18 ¶11
Fa Abotar Tu Mbirika No
Nna ‘adasefo mununkum kɛse’ no nntse dɛ bɔhwɛadzefo bi a wɔaba akansi bi ase dɛ wɔrobɔhwɛ bi kɛkɛ, anaa wɔrebɛtaa hɔn nyimpa bi anaa kuw bi ekyir ma woedzi konyim wɔ akansi no mu. Mbom, dɛm adasefo mununkum kɛse yi ka hɔn a wotu nkwa ho mbirika no ho, tse dɛ hɔn a wotu mbirika wɔ akansi mu. Woetu mbirika no ewie na woedzi konyim. Ɔmmfa ho dɛ sesei wɔnntse nkwa mu no, wɔtse dɛ mbirikatufo a hɔnho akokwaa, a wɔrehyɛ afoforfo a hɔn so worutu mbirika yi bi no nkuran. Ɔwo dze fa no dɛ obi rutu mbirika wɔ akansi bi mu. Onyim dɛ hɔn a wɔwɔ hɔ rohwɛ no na wɔrobɔ gye no do no mu pii no yɛ mbirikatufo a nna hɔnho akokwaa na wɔagye dzin pɛn. Ehwɛ a dɛm nyimpa a orutu mbirika no bɛtse nka dɛn? Sɛ ɔhwɛ hɔn a wɔrobɔ gye no do no a, aso ɔremma ɔnnyer noho nntu mbirika no yie nnkyɛn mbrɛ osi tu no daa no? Tsetse adasefo a yɛrekã hɔnho asɛm yi botum edzi ho dase dɛ, wɔ dɛm nsɛnkyerɛdze kwan do mbirika a yerutu yi mu no, sɛ no mu yɛ dzen dɛ dɛn ara mpo a, yebotum edzi konyim. Osiandɛ Christianfo a nna wɔwɔ asomafo no ber do no werɛ emmfir “adasefo mununkum” no hɔn nhwɛdo no ntsi, wotumii nyaa akokodur dze ‘abotar tuu mbirika no’​—na dɛmara na ndɛ so yebotum ayɛ.
w89-E 12/15 22 ¶10
Bɔ Afɔr A Ɔsɔ Jehovah N’enyi
Nna ɔnnsɛ dɛ Hebrewfo no ma kwan ma hɔn a wɔrehyɛ Judasom ho nkuran no dze hɔn ‘nkyerɛkyerɛ horow fofor bi fa hɔn kyinkyin.’ (Galatiafo 5:1-6) Osiandɛ, sɛ nna wɔpɛ dɛ hɔn ase tsim wɔ nokwar no mu a, nna ogyina ‘Nyankopɔn n’adom ara kwa a obotum dze ahyɛ akoma dzen’ no do, na nnyɛ dɛm nkyerɛkyerɛ no. Obotum aba no dɛ nna binom gye edziban na afɔrbɔdze ho kyim, osiandɛ Paul kãa dɛ “nnyɛ edziban a hɔn a wɔnantsew mu ennya mfaso bi no” do na wɔnam hyɛ akoma dzen. Ɔnam nyamesompa na enyisɔ a obi benya ama werdam no do na obenya sunsum afamu nkɔdo, na nnyɛ edziban pɔtsee bi a obi bedzi anaa da pɔtsee bi a obobu akyɛn bi no. (Romefo 14:5-9) Afei so, Christ n’afɔr a ɔbɔe no dze Levifo asɔfo no hɔn afɔrbɔ no baa ewiei.​—Hebrewfo 9:9-14; 10:5-10.
AKORADZE A OFI NYANKOPƆN N’ASƐM MU | JAMES 1-2
“Ebɛnadze Na Ɔdze Bɔn Na Owu Ba?”
Sɛ inya akɔndɔ wɔ biribi ho a na dɛm adze no tum sɔ wo hwɛ​—nkanka biribi a ɔyɛ bɔn. Dɛ nhwɛdo no, fa no dɛ erotɔ adze wɔ beebi na ehu biribi a w’enyi gye ho. Amonmu hɔ ara, adwen bi botum aba wo tsirmu dɛ ibotum ewia adze kor no a obiara runnhu. Naaso wo tsibowa kã kyerɛ wo dɛ, mma nnyɛ! Ntsi iyi dɛm adwembɔn no fi wo tsirmu na ifi hɔ. Wɔ dɛm ber no, sɔhwɛ no aba n’ewiei, na edzi konyim.
DZA BIBLE NO KÃ
Sɛ biribi sɔ wo hwɛ a, ɔno nnkyerɛ dɛ eyɛ nyimpa bɔn. Bible no ma yehu dɛ hɛn nyinara hyia sɔhwɛ. (1 Corinthfo 10:13) Dza no ho hia papaapa nye mbrɛ yɛyɛ hɛn adze aber a yerihyia sɔhwɛ no. Binom dze hɔn adwen nyina si akɔndɔ bɔn do araa ma hɔn enyi bɛba hɔnho do no, nna wɔayɛ bɔn. Afofor so dze, woyi adwen a ɔtse dɛm no fi hɔn tsirmu ntsɛmara.
“Obiara wɔsɔ no hwɛ, ɔnam dɛ nankasa n’akɔndɔ twe no kɔ na ɔdaadaa no.”​—James 1:14.
Bible no ma yehu dza ɔtwetwe obi kɔ bɔn mu. James 1:15 kã dɛ: “Na akɔndɔ [bɔn] no nyinsen a, ɔwo bɔn; na bɔn no wie nyin a, ɔwo owu.” Sɛ yebotwa no tsia a, sɛ yɛkɔ do dwendwen ndzebɔn ho a, obodu beebi no, ɔbɛyɛ tse dɛ ɔbaa a onyinsen a awoo aka no, yɛyɛ ho hwee a ɔrennyɛ yie, ntsi bɔn no ara na yɛbɛyɛ. Naaso, yebotum ekwetsir dɛ yɛbɛyɛ nkowaa ama akɔndɔ bɔn. Nyew, yebotum edzi akɔndɔ bɔn do.
Jehovah nye “kan Egya no.” (Jas 1:17) Nnyɛ dɛ ɔno na “ɔma ewia hyerɛn adzekyee, na ɔhyehyɛ bosoom na nworaba ma wɔhyerɛn anago” nko, (Jer 31:35) na mbom ɔnoara so nye sunsum mu kan a ɔhyerɛn no nyina Farbaa. (2Co 4:6) Ne mbra, n’atsɛmbu, na n’asɛm no nyina yɛ kan ma hɔn a wɔma kwan ma dɛm ndzɛmba yi kyerɛ hɔn kwan no. (Nd 43:3; 119:105; Mbɛ 6:23; Isa 51:4) Dwontofo no kãa dɛ: “Wo kan mu na yebohu kan.” (Nd 36:9; fa toto Nd 27:1; 43:3 ho.) Tse dɛ mbrɛ ewia ne kan kɔ do hyerɛn nkakrankakra fi anapaatu araa “kodu ewia ketee” no, dɛmara so na ɔtseneneenyi no kwan tse; sor nyansa kɔ do hyerɛn wɔ n’akwan mu nkakrankakra. (Mbɛ 4:18) Sɛ yebotum anantsew Jehovah no kwan do a, ɔsɛ dɛ yɛma ne kan no kyerɛ hɛn kwan. (Isa 2:3-5) Naaso, sɛ obi kɔ do ma n’enyi ber biribi anaa onya adwembɔn anaa akɔndɔbɔn wɔ biribi ho a, ɔkyerɛ dɛ ɔwɔ sunsum afamu sum mu. Dɛ mbrɛ Jesus kãe no: “Sɛ w’enyiwa muo a, wo nyimpadua nyina bɛyɛ kusuww. Na sɛ kan a ɔwɔ wo mu no yɛ sum a, sum no ne kɛse tse dɛn!”​—Mt 6:23; fa toto De 15:9; 28:54-57; Mbɛ 28:22; 2Pe 2:14 ho.
“Mbra Kunyin.” Sɛ yɛdze “mbra kunyin” no toto mbra ahorow biara a ɔhen bi bɛhyehyɛ ama ne mamfo na aama asomdwee aba hɔn ntamu no ho a, yebotum akã dɛ ɔkrɔn na no ho hia kyɛn ne nyinara. (Jas 2:8) Dza nna Mbra apam no gyina do ankasa nye ɔdɔ; na ne fã a ɔkã dɛ “dɔ wo nyɛnko dɛ wankasa woho” (mbra kunyin) no nye dza nna otsĩa ebien, na ɔno do na nna Mbra no nye Nkɔnhyɛfo no nyina sɛn. (Mt 22:37-40) Ɔwɔ mu dɛ Christianfo nnhyɛ Mbra apam no ase dze, naaso wɔ ahyɛmu fofor no mu no, wɔhyɛ mbra a ofi Ɔhen Jehovah na ne Ba, Ɔhen Jesus Christ hɔ no ase.
Fante Nwoma Ahorow (2015-2019)